Mareeronews.com | Archive | May
Madaxweyne Shariif oo la kulmay Madaxweynaha Turkiga Cabdalla Gul+sawirro
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta la kulmay Madaxweynaha dalka Turkiga Cabdalla Gul, iyagoo ka wada hadlay arrimo badan oo ku saabsan xiriirka labada dal. Kulankan ayaa waxaa uu…
Shirkii Somaalida oo ka furmey Istanbul
Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa maanta 31 May,2012 waxa ka furmey shirka Somalida ee Istanbul 2,waxana ka soo qaybgalaya ku dhowaad 54 dal oo dunida ku tirsan waxana horkacaya…
Soomaali u xiran qabiil Liibiya deggan (Wareysi Murugo badan)
Dad Soomaali ah oo ku xiran xabsi ku yaalla magaalada Tripoli ee dalka Libya ayaa ka cabanaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah iyo dhibaatooyin ku heysta gudaha xabsiga. Aweys…
Wafdiga Puntland uga qabygalaya Shirka Turkiga oo ka duulay Caasimada Puntland.(Sawiro iyo Magacyada Xubnaha)
Gegida dayuuradaha Garowe ayaa galabta waxa ka duuley xubnihii Puntland uga qaybgali lahaa shirka Istanbul waxana ka hor diyaaradu soo martey Galkacayo iyo Bosaso oo ay dad ka soo qaadey.…
Puntland oo ka qayb galeysa shirka ka socda Istanbul kadid markii Dowladu Turkigu saxitaan sameeysay.
War hadda soo gaaray war-qabadka Radio Daljir kana imaanaya magaalada Ankara ee xarunta waddanka Turkiga ayaa sheegaya in is-baddal lagu sameeyey qorshihii horay loogu dejiyey shirka dhinacyada siyaasadda Soomaalida iyo…
Wararkii ugu dambeeyay duqeyn Maraakiib dagaal maanta u geysteen Kismaayo
Labo Markab oo kuwa dagaalka ayaa saaka duqeyn u geystay Magaalada Kismaayo, iyadoo ilaa labaatameeyo madaafiic ku tuuray Xaafadaha ku dhow dhow Xeebta iyo Dekeda. Warar soo baxaya ayaa sheegaya…
Isimada Puntland oo soo saaray Bayaan looga soo horjeedo shirka ka socda Istanbul.SAWIRO
Issimada iyo odayaasha dhaqanka Puntland ayaa maanta 29 May,2012 shir ay ku yesheen magaalada Garowe kadib waxay ka soo saareen qodobo dhawr oo ay uga so horjeedaan shirka Istanbul ka…
Idaacad iyo Telefeshin ku Hadlaya Magaca Puntland oo Dhismahooda la dhagax dhigay.
Magaalada Garowe waxa la dhagax dhigey dhismaha xarunta idaacada iyo telefishinka Puntland oo ku deeqdey dowladda Talyaanigu. Idaacadan ku hadli doont afka Dowladda Puntland ayaa mowjadaha gaagaaban la dhagyesanayaa Shor…
Xukuumada R.wasaare Gaas oo walaac ka muujisay Shirka Turkiga
Warsaxafadeedkaan ku taariikheysan May 29, 2012 ayaa kasoo baxey xafiiska Wasiirka Dastuurka, Federaalka iyo dib u heshiisiinta H.E. Abdurahman Hosh Jibril kaasoo lagu sheegey in xukuumada uu hogaamiyo Ra’isal wasaare…
Puntland oo sheegtay in Dowladda Turkiga uga baxday Ballan qaadyo ka dhexeeyay
Afhayeenka Madaxtooyada Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey go’aankii Dowladda Puntland ee ahaa in aysan ka qaybgalaynin shirka ka dhacaaya bisha soo socota magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Axmed Cumar Xirsi…
Page 1 of 9123Next ›Last »	Yaad Madaxweyne u dooran lahayd?